Nama Ajjeessuun Mo’amuu Dha |
Home Afaan Oromoo Nama Ajjeessuun Mo’amuu Dha
Damee Boruu tin: Amajjii 17, 2019
PM Abiy Ahmed of Ethiopia, the new war-monger in Oromia
“Nama Ajjeessuun Mo’amuu Dha”, Kononeel Abiyi Ahmed jecha kana Afaan Amhaaraan dubbate. Hiikaan Afaan Oromoo kan koo ti. Kononeel Abiyi Hojii Minilikii fi Kononeel Mangistu Haayile Maariyam baayyee ulfina qaba.
Kononeel Menigstuun, “Itoopiyaa Tiqidam Yaalee Minim Dam” jechaa aangoo gaafa dhuunfatee biyyaa Itoopiyaa jedhamtu dhiigaan dhiqe. Kononeel Abiyis “Medemeriinaa Mefeqaaqer” jechaa uummata gowwoomsaa dhiiga caalu dhangalaasuu deema. Deemsa nama kana namni hubannee yoo jiraate garaa isaaniif jiraatu duwwaa taha.
Namootni akka Abiyii fi Mangistuu namoota gadi-aantumman itti dhagamu warra gadadoo tahanii dha. Lubbuu dhala namaaf dantaa tokko illee hin qaban. Kononeel Mangistuun goota of fakkeessuuf, “amma namni tokko hafutti ni lola”, jechaa waraana kuma dhibaan lakkawwamu facaasee lubbuu isaa baafachuu finxiriree bada. Namoonni amala kana qaban gaafa dhugaan dhufu bakka dubbatan sana hin jiran.
Kononeel Abiyi “Kan nama ajjeessu nama mo’ame dha”, jedhee dhaadachaa daa’imaa fi dubartii xiyyaaraan yaroo ajjeessuun mo’amuu hundaa caalu dha. Ulee namaaf safaraniin reebamuun salphina guddaa dha. WBO loluuf xiyyaaraan mana barumsaa gubbuuf, daa’imaa fi dubartii xiyyaaraan ajjeessu hin barbaachisu. WBOn dagala keessaa jira. Wallaga dhaqee akka hin lolle na ajjeessu jedhee sodaachaa akka jiru himateera. Namoota garaa isaaniif jiraatan hedduu waan qabuuf isaanii itti bobbaasu danda’a ture. Garuu isaanis akkuma isaa warra du’a sodaatan waan tahaniif oluuu irra baqachuu filatu. Kanaafuu xiyyaaran sammuu uummata keenyaa jeeqee sodaachisuuf abbalittii godhamu malee xiyyaaraan lola kana mo’uuf akka hin taane innuu ni beeka.
Erga mana barumsaa gubee, daa’imaa fi dubartii xiyyaaran ajjeessee Oromonni Wallagaa isa ajjeessuu miti foon isaa qalee sareef laachuuf haqa qaba. Namin kun sobaan qabsoo ilmaan Oromoo kumaatan itti wareggamn harkaa butee Uummata Oromoo irratti dhaba kana fakkaatu raawwachuun cubbuu guddaa dha. Baayyee nama gadissisas. Walii gala OPDOn wagga 27 ol diina Uummata Oromoo wajjin tokko taate dhiiga ilmaan Oromoon harka dhiqachaa turte.
Lammaa fi Abiyi baastotaa fi nagaa eegduu EPRDF akka turan eenyu jalaa iyyuu dhokkataa miti. Kana hundaa utuu beeknu mee yaroo haa laanuuf yoo rakkina uummata keenyaa kanaaf furmaata xiqqoo illee yoo kan fidan tahe jennee ilaalu filanne. Yaoo uummatni keenya miliyoonan buqa’u, kumaatan du’u waan harka keessaa qabaniif akka nama hin agare caluma jechuu filatan. Kunoo ofii isaanii itti darbanii yaroo hidhaa fi ajjeessaa, xiyyaaran gubee jiran argaa jirra. OPDOn farra Uummata Oromoo tahu irraa of jijjiruu hin dandeessu. Dhiiga ilmaan Oromoo waan of harkaa qabduuf jecha Uummata Oromoo wajjin Kaayyoo tokko qabaachuun itti jabaata.
Dawuud Ibsaa waraana biyyaa Eritreatti of harkaa qabu kan gara 1300 tahu akka walii galtee isaanii itti OPDO kennee badaa Arsii keessa mana hidhaa jiru. Gootota haqa uummata isaanii falamuuf jecha gamoojii keessa daamaraa turan OPDOn warri kun Tigree dha jettee maqaa yaroo xureessitu dhaga’uun garaa nama hameessa.
WBO Dhiha Oromiyaa, Kibaa Oromoo, Baha Oromiyaa fi Jiddu gala Oromiyaa jiru Dawuud Ibsaatu baatii sadii keessati xiyyaaraan fidee harcaase? Gaaffi OPDO warri kun waggaa 27 eessa turan jettuuf? deebiin isaa uummata isaanii keessa hudduu OPDO jala turan. Warri tokko-shan humna basaasa Wayyeene ciree uummata Oromoo duuchaa dammaqisee qawwee malee Mootummaa EPRDF gombse warra kana akka tahe dagachuu hin qabdu. WBOn wagga 27 argatu ija mukaa nyaatee dhabu beela’ee dheebotee dhakaa boraafatee goota dagala Oromoo raasaa ture dha.
WBOn ilmaan Oromoti. WBOn qabeenya dhunfaa Uumata oromoo ti. WBOn gaachanaa fi Abdii Bilisummaa Uuumata Oromoo ti. WBOn qama Uummata Oromoo ti. Kanaafuu WBOn kan badu yoo Uummatni Oromoo bade qofa taha.
Uummatni Oromoo warra garaa isaaniif jecha deemanii waan barbaadan afuufaa oolanii fi warra waan dubbatan hojiin agarsiisan adda baase bareechee hubachuu qaba. Yoo kana hin taane dadhabbii fi diigamtu isa mudachuuf deema. Warra sab boonaa aka Leencoo Lataa kan owwaala haadha fi abbaa isaa xiyyaaraan lafa keessatti gubsiisaa jiru Uummatni Oromoo nuuf dhaabate jedhee eegachuun waan hin fakkaatne.
WBOn hidhatee jiru OPDO miti eenyuufuu hiikachuu qabu. Hiidhanaa hiikatanii dhumuun baayyee hamaa dha. Yoo of irratti lolle duwwa dandamachu dandeenya. Karaa dandeenyu maraa hidhachuu fi wal hidhachiistu gaaffi yaroo tahee argama. Araarrii fi nagaan dhugaa kan argamuu danda’u utuu hidhannaa wal hin hiikachiisiin qofa.
Uumatni Oromoo waggaa 150 gara boodaatti deebi’ee nafxanyootan dhiitamee buluu kan oolu yoo akka kaleessa harka wal qabtaee irree tokkon diina isaa dura daabate qofa. Kana gochuuf WBO akka aggartuu ija isaa eegachuu qaba. Karaa danda’u maraa gargaaruu fi wajjin dhaabbachuu barbaachisaa dha. Qabsoon Xumura Garbummaa haa jabeefannu!.
Previous articleOduu social media irraa guurame rakkoo ABO fi OPDO ilaalchisee, Amajjii 16, 2019
Next articleEthiopia fuel squeeze and Djibouti’s continued economic importance
Olansa January 17, 2019 At 11:48 am
“Yaale minim Dem, Inkenway Yiwdem;
BeKennaa Menfes, Iiopiaa Tikdem” jedhe calqabe Dargin.
Xumuura isa garuu arginerra. Motummaan Abiy Ahmed isumattti jira. Kan nama dhibu garuu, kan nama gaddisisu garuu, OPDOn yommuu Angoo hinqabaannee Ergamtuu ta’u ishii bira darbee, erga Aangoo dhuunfadhee jettee dubbattee boodaa illee, Ergamtuu ta’uu ishiitti. Kuni Qaanii Qaanii caaluu dha. OPDOn, lammaffaa OPDO ta’a jirti. ODPn OPDO ‘squared’ dha. OPDO Times OPDO = ODP. Mallif jennan OPDOn duranii ergama wayyanee bakkan geesuu turte, iddo itti Sammuun yaaddee, yaadaa burqisiftee, xiinxaltee, buuftee-baaftee, karooraa baafattee, bilisa taatee biyyaa bulchitu hinturree. OPDOn “Wattadaraa” TPLF turte. Har’a Barchuma ittin biyya bulchan Of-harka qabna jetti afaaniin. Garuu karoora nafxanyaan baaftee itti kenniteen, Qajeelfama nafxanyotaan biyya bulchaa jirti. Media ESAT-illee dhiibbaa kana hinjedamnee irran gahati jirti. Oromon kana hin-hubannee yoo jirate, hubachuu qaba. Afaan Amaraa hinbeektan yoo ta’e, walif-hiikaa. “Keep your friend close, and your enemy even closer” jecha jedamu beektuu?
Sab-quunamtiin Habasotaa wal-dhibdee ABO fi ODP uumuu kessaa qooda qaban, erga huumamee immoo Beenzila ykn Gaazaa itti naqaa jira, yommuu hummanni keenya Xiyaaraan rukutamu gammachuun lafa dhiitanii fii dhiitaa jiran. Wanta isaa gidduu kana jecha jiran quba qabduu? Araaraa buusuu MNA fi MNT giddutti adeemsifama jiru ilaalchisee?. Araara MNT fi MNA ti gammachuu isanii ibsaa jiru. Wal-waraansa Ilmaan Oromoo gidduu adeema jiru irratti garuu gammadaa jiru. Dubbii kana iraa maal baratta Oromoo? Maal Barattaa Oromticha, Oromtitti. Siyaasa beekuuf siyaasa barachuu nama hinfeesisuum!.
Oromoon yommuu mammakuu, “Kan akkaa Shumburaa jaalatan, akka Gaayyoo nama cabsaa” jedha. Dubbiin Abiy Ahmed fi Lammaa akkasuma ta’aa jira. We thought that they were authentic. What a let down. Ilmaan Oromoo Oromummaa dhugaa jiraataan nutti fakkataatee abdannee turre. Mudoo irratti arginu-illee, beeknee isanif bira darbaa ture, dogoggra isanii irraa, dhawaata sirraahuu jennee abdannee turre. TPLF caalaa Oromummmaa diineffatanii, Oromiyaa bittinessuf hojjatu jedhee kan yaade hinturre. Garuu wanti isaan itti jiran kuni, diinaa Oromia isa tokkoffa isan godhaa jira. Badii dhufuu malu hubatanii Of-sirressuu jedheen abdadha, kuni Hawwii koti.
Wal-waraansi Obbolaa eenyufuu gaarii miti. TPLF/EPLF akkatti isan hummata isanii salphisan hinuma yaadanaa? yeroo “Ethio-Eritrea War” sana. Nan yaadadha yero sana, otoo wal-waraansi hincalqabamin dura, akkuma Dibbeen waraana dhahuu calqabame, akkatti haadholiin Ertrea fi Tigray TPLF fi EPLF akka wal-hinwaraanne, uffata isanii lafa afanii kadhchaa turan. Garuu wal-waraansa sana dhaabuu hindandeenye, kan isaan dhagau dhaban. Oromticha waa’ee kanaa xiinxalee barresse, barreffama ” Kindling Point” jedhu dubbisuu dandessu. RIP my hero Sisai Ibsaa.
“Kan Arrabni dhalchu, Kormi yaabee hindalchu”, jedha oromoon yommuu mammaku. MM Abiy Ahmed otoo wanta dubbatu xiinxalee, miijanee dubbatee gaarii dha. QBOti qoosuun Halaagaa gmmachisufi mala, isaniif amana ta’uu isaa ragaa bahu mala, garuu Oromoon akka isa diinefatu godhaa jira. Siyaasa biyya biraa kessa seenee borchuu otoo baatees isaaf gaarii dha natti fakkata. Waa’ee siyaasa Ameerikaa, Waa’ee siyaasa middle-east dooyaa gubbatti dubbachun bilchina dhabuu isaa natti argisisa; Mangistuu Hailemariam isa fakkessaa jira.
“It is better late than never” jedha faranjiin. Ammas taanaan dantaa hummata Oromoof hojjachuun hindanda’ama. Karaa sirritti deeb’uu qabna. Failure is not an option!. Waliif Obsuu, wal-dhagahuu, wal-sirressu nu-fessisa. yoo wal-taane, Oromummaa irratti hundofnee, halagaa dhimma keenya kessa baafnee, wanti nuti gochuu dadhabnu hinjiru. Nuti Ilmaan Abbaa gadaa adda dha. Siyaasaa gaanfa Afrikatti ‘Paradigm shift” fidaa jirra otoo jenne odessinuu, dhugumatti karaa isaas calqanee otoo jirruu, karaa irraa maqnee, akkuma siyaasa Abashota barame santti deeb’uun nuuf hinmluu. Kuni qaanii dha. Let’s get out of this cycle! Hindandeenya, hedduu fuulruratti adeemnee, duubatti hindeebinu. Haamilee ittin qabsoofnee as-geenye sanatti haadeebinu, “synergy” keenyaa haa-haaressunu.